संगीत यात्रामा युगीन | के. एल. पीडित | Saugat : Naya Yougbodh
करिब बाह्र वर्षअघि दाङको उर्वरभूमिबाट नेपाली कला, संगीतको प्रबद्र्धन गर्ने महान आकांक्षा र सपना बोकेर केही उत्साही एवं प्रतिभाशाली युवाहरुले एउटा सांगीतिक समूह निर्माण गरेका थिए– युगीन ब्याण्ड । यो दाङको पहिलो सांगीतिक ब्याण्ड थियो । त्यो ब्याण्डका सदस्यहरुमा सतिश राजभण्डारी, विशाल श्रेष्ठ, बिराजमान श्रेष्ठ, प्रमोशन रोका, आलोक भुसाल, राजकुमार श्रेष्ठ, टीका विष्ट र सुमन सिंह थिए । दाङका बिभिन्न स्थानहरुमा कन्सर्ट गर्नुका साथै ब्याण्डले फस्ट युग र गन्तव्य गरी पप शैलीका दुई वटा एल्बम पनि प्रकाशित ग¥यो । दाङको सांगीतिक विकासमा युगीन ब्याण्डको भूमिका निकै अविष्मरणीय छ ।
बिडम्बना ! समयको अन्तरालसँगै युगीन ब्याण्डका सबै सदस्यहरु लाखापाखा लागे । कोही लाहुरे भए । कोही जागिरे भए । कोही कता हराए कता । यो ब्याण्डमा आज विशाल श्रेष्ठ मात्र छन् । उनले एक्लै यो ब्याण्डलाई जोगाएका छन् र संगीतकर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । राप्ती क्षेत्रको अग्रणी एवं प्रतिष्ठित ब्याण्डको रुपमा युगीन आज पनि जीवित छ । यो ब्याण्डलाई आफ्ना दर्शक एवं श्रोताहरुमाझ जीवित बनाइराख्न विशालले आफ्नो नाम नै युगीन राखेका छन्, अर्थात् संगीतको क्षेत्रमा उनी अब युगीन श्रेष्ठको नाममा स्थापित र क्रियाशील छन् । ‘ब्याण्डलाई जोगाउन मैले आफ्नो नाम युगीन राखेको हुँ ।’ युगीनले भने, ‘अब युगीनको नाममै संगीतकर्मलाई अगाडि बढाउँछु ।’
सानैदेखि गीतसंगीतमा विशेष रुचि भएका युगीन अहिले राप्ती क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभाको रुपमा अगाडि देखिएका छन् । संगीतप्रतिको निष्ठा, समर्पण र साधनाले उनी निरन्तर सफलताको शिखरमा उक्लदैछन् । उनका सिर्जना निकै सुन्दर र लोकप्रिय हुँदैछन् र उनलाई श्रोताहरुले पछ्याउन थालेका छन् । यसले युगीनलाई निकै उत्साहित र गौरवान्वित बनाएको छ र संगीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको छ । ‘आफ्ना सिर्जनाले दर्शक÷श्रोताहरुको मन जितेको पाउँदा निकै खुशी लाग्छ र थप सिर्जनाका लागि हौसला मिल्छ’ उत्साहित हुँदै युगीन बताए ।
गीतसंगीतका सबै विधाहरुमा उत्तिकै दख्खल भएका बहुआयामिक प्रतिभा हुन् युगीन । उनी गायक, संगीतकार, एरेञ्जर, बाद्यवादक, रचनाकार सबै हुन् । एकदम फराकिलो छ उनको परिचय । हरेक विधामा उनी सफल छन्, श्रेष्ठ छन् । उनका सहकर्मीहरु उनलाई बहुप्रतिभा भनेर सम्बोधन गर्छन् । यसले युगीनलाई सर्वाधिक आनन्दानुभूति हुन्छ र आफ्नो कर्मप्रति गौरवको भाव जाग्छ ।
‘हाँस न तिमी बोल न’ बोलको गीतमा उनले पहिलोपटक स्वर दिएका थिए, २०५८ सालमा । यो उनको आफ्नै संगीत र रचनाको गीत थियो । आजसम्म उनले दुई दर्जन बढी गीतहरुमा स्वर दिएका छन् । बिभिन्न एल्बम एवं फुटकर रुपमा उनले १ सय ५० बढी गीतहरुमा संगीत दिएका छन् । छल र छलबाटो गरी दुइवटा चलचित्रमा उनले संगीत दिएका छन् । यी चलचित्रहरुमा उनले पाश्र्वसंगीत पनि दिएका छन् ।
कुनै बेला गायनमा विशेष रुची थियो उनको । तर पछिल्लो समयमा उनी म्यूजिक एरेञ्जरको रुपमा स्थापित हुँदैछन् । उनले पहिलोपटक एरेञ्ज (संगीत संयोजन) गरेको उनको मुस्कानले बोलको पप गीत उतिबेला राप्ती क्षेत्रमा अत्यधिक लोकप्रिय बनेको थियो । जसलाई उनका भाइ विराजले गाएका थिए । झण्डै १ सय जति गीतहरुमा संगीत संयोजन गरेका युगीनको पछिल्लो सिर्जना सूदन थापाको रचना र संगीत तथा राजेश पायल राईको स्वरमा शीघ्र बजारमा आउँदैछ । यस गीतको संगीत संयोजन निकै उत्कृष्ट रहेको हुँदा युगीन निकै उत्साहित छन् । ‘यस गीतबाट म निकै आशावादी छु । यस गीतले मलाई नयाँ उचाइ दिनेछ । विश्वासभावमा युुगीन बोले ।
बुबा बसन्तमान श्रेष्ठ र आमा शोभा श्रेष्ठको कोखबाट वि.सं. २०३८ मंसिर २१ मा दाङको घोराहीमा जन्मेका युगीन एक भाग्यशाली स्रष्टा हुन् । उनले घरमै सांगीतिक वातावरण पाएका छन् । आफ्नै घर संगीतको पाठशाला बनेको छ । बुवा एक जिम्वेवार प्रशिक्षकको रुपमा हुनुहुन्छ । युगीनका बुवा बसन्तमान दाङ एक स्थापित संगीत क्षेत्रका बहुआयामिक प्रतिभा हुनुहुन्छ । ‘मैले स्वर अभ्यास गर्दा बुवाले सिकाउनु हुन्छ । बुवाको साथ, सहयोग र प्रशिक्षण पाएको छु । आफूलाई एकदमै भाग्यशाली ठानेको छु ।’ युगीनले बताए ।
विनयशील, कर्मशील औ बहुआयामिक प्रतिभा युगीनको सांगीतिक भविष्य निकै उज्वल र गौरवपूर्ण छ, शुभकामना ।